Chikwata chekunyora ▷➡️ VidaBytes | LifeBytes
HupenyuBytes ndeye AB Internet webhusaiti. Pane ino webhusaiti isu tinozivisa nezve main nhau, zvidzidzo uye mazano pamusoro penyika yetekinoroji, mitambo nemakombuta. Kana iwe uri mudiwa wehunyanzvi, kana ropa richipfuura nemutsinga dzako techies ipapo Vidabytes.com ndizvo chaizvo zvauri kutsvaga.
Kubva payakatangwa muna 2008, VidaBytes haina kumira kukura zuva nezuva kusvika yava imwe yemawebhusaiti makuru muchikamu.
The VidaBytes edhita timu inoumbwa neboka re tekinoroji nyanzvi. Kana iwe zvakare uchida kuve chikamu chechikwata, unogona titumire iyi fomu kuti uve mupepeti.
Kushambadza uye graphic mugadziri. Mukuenderera mberi nekudzidziswa mune zveprogramming nyaya. Kudzidza zvese zvakatenderedza nyika yetekinoroji kwakakosha nhasi.
Pekutanga pandakabata kombiyuta ndaiva nemakore 18. Ndisati ndambovashandisa kutamba asi kubva ipapo ndakakwanisa kupenengura nekudzidza sainzi yekombuta semushandisi. Ichokwadi kuti ndakatyora zvishoma, asi izvo zvakaita kuti ndirege kutya kuedza nekudzidza kodhi, zvirongwa uye zvimwe zvinyorwa zvakakosha nhasi.
Mbiri yeboka rekunyora reVidaBytes.
Kwidziridzo Nhasi yaive webhusaiti yakatsaurirwa kune nyika yesoftware uye masisitimu akabatana neVidaBytes makore mashoma apfuura uye parizvino zvese zviri mukati zvakabatanidzwa mune ino webhusaiti.
Vadivelu Comedy Techno Informatics
Mudzidzisi wemakombiyuta. Computer Systems mudzidzi anoda kubatsira munhu wese kudzidza nezve tekinoroji nhanho nhanho.
Redesenred yaive webhusaiti yekare nezve Networks uye Makomputa iyo parizvino iri chikamu cheVidabytes.com